Псалтирь 3 NRT - Nnwom 3 NA-TWI | Biblica América Latina
Псалтирь 3 NRT - Nnwom 3 NA-TWI
Ahohia bere mu anɔpa mpae
1O Awurade, nnipa bebree tia me. Nnipa pii pɛ sɛ wɔhaw me. Mewɔ atamfo bebree. 2 Bebree no ara ka se Onyankopɔn remmoa me da. 3 Nanso, Awurade, wone me kyɛm, m’anuonyam ne m’anidaso. Wo nko ara na wubetumi apagyaw me ti a masi no ase aniwu mu no.
4 Misu mefrɛɛ Awurade, na ɔtee me nka wɔ n’asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no mu. 5 Metɔ hɔ da, na anadwo no nyinaa, Awurade bɔ me ho ban ma minyan asomdwoe mu.
6 Ɛwom sɛ mprempren atamfo ɔpedu atwa me ho ahyia de, nanso minsuro. 7 Mesu mafrɛ no se, “Sɔre, O Awurade! Gye me nkwa, o me Nyankopɔn!” Na bobɔ m’atamfo nyinaa abogye. Na bubu nnebɔneyɛfo se.
8 Efisɛ, nkwagye fi Onyankopɔn. Na ohyira ne nkurɔfo nyinaa.
NA-TWI : Nnwom 3